बिकास गर्न भि’जन चाहिन्छ, त्यो भि’जन मसँग छ, काम गर्न मौका दिनुस, नेपाललाई जापन बनाउछु: डा. बाबुराम भट्टराई – Points Nepal
बिकास गर्न भि’जन चाहिन्छ, त्यो भि’जन मसँग छ, काम गर्न मौका दिनुस, नेपाललाई जापन बनाउछु: डा. बाबुराम भट्टराई
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ ०६, २०७८ समय: १५:५७:३१
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले गफ हाँकेर मुलुकमा विकास र समृद्धि ल्याउन नसकिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय व्यपार संघले आईतबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले मुलुक बिकासका लागि विज्ञहरुसँग ज्ञान, सीप र अनुभव सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष भट्टराईले देश बनाउछु भन्नेहरुले गफ र गुड्डी मात्रै हाँकेको आरोप लगाउनुभयो। कार्यक्रमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकलाई विकास र समृद्धि गर्न विज्ञहरुसँग ज्ञान, सीप र अनुभव सदुपयोग गर्नुपर्छ। अनि मात्रै देश बन्छ। गफ हाँकेर होईन, गुड्डी हाँकेर होइन।’
राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिदोष अहिले मुलुकले दुरगति भोगेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै उहाँले कृषि, उद्योग र सेवाका क्षेत्रहरुको उचित सन्तुलन मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। देश बिकास गर्ने भिजन आफुसँग प्रसस्त रहेको भन्दै आफुलाई मौका दिएमा देशलाई प्रगतीपथमा अगाढी बढाउने प्रण गर्नुभयो।
साथमा यो पनि: भुसालले एमाले छाडे, माधवको एसमा प्रबेस!
देशभरबाट एमाले छाड्ने क्रम बढेको छ। यसैबीच, अर्घाखाँचीका युवा गोविन्द भुसाल तिनै माधव, झलनाथको पार्टीमा प्रवेश गर्ने तयारीमा लागेका छन्। पार्टीको महाधिवेशन तथा जिल्ला अधिवेशनसम्म आइपुग्दा पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी, व्यक्तिवादी मनोमानी, चरम अवसरवाद, नातावाद कृपावाद र नेतृत्वमा देखिएको निरंकुशतालगायतका प्रवृत्तिबाट आजित भई एक युवा नेताले एमाले राजनीतिबाट साधरण सदस्य समेत नरहने गरी राजीनामा दिएका छन्।
यसरी राजीनामा दिएर हिड्ने अवस्थामा पुगेका हुन् अर्घाखाँची जिल्लाका इञ्चार्ज गोविन्द भु्षाल। भुषाल नेकपा एमाले निकट रास्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रीय कमिटी सचिवको भूमिकामा समेत रही पार्टी र संगठनका हितमा काम गर्दै आइरहेका थिए।
हिजोमात्र सम्पन्न एमाले अर्घाखाँचीको आठौं अधिवेशनले पिताम्बर भुसाललाई अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको थियो।
चितवनमा सम्पन्न महाअधिवेशन,सो अघि भएका पालिका महाअधिवेशनदेखि हिजो सम्पन्न जिल्ला महाअधिवेशनसम्म आइपुग्दा पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी, व्यक्तिवादी मनोमानी, चरम अवसरवाद,
नातावाद कृपावाद र नेतृत्वमा देखिएको निरंकुशताजस्ता प्रवृत्तिबाट हामी जस्ता इमान्दार र निष्ठावान नेता तथा कार्यकर्ताहरु एमाले पार्टी र यसका जनवर्गीय संगठनमा निरन्तर काम गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले आजका मितिदेखि राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सचिवलगायतका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट राजीनामा गर्दै नेकपा एमाले को साधारण सदस्य समेत नरहेको घोषणा गर्दछु।
भुषालले सामाजिक सञ्जालबाटै राजीनामा ठोकेका हुन्। यसअघि जिल्ला अधिवेशनकै मुखमा सिन्धुपाल्चोकका पुराना कम्युनिष्ट नेता सुवास कर्माचार्यले सो पार्टीबाट विद्रोह गरेर निस्किएका छन्। उनी ठूलो दलबलसहित एकीकृत समाजवादी पार्टीमा समाहित हुने तयारी गर्दैछन्।
Last Updated on: January 20th, 2022 at 3:57 pm